ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: December 2015
ဘဝစာမျက်နှာသစ်တွေ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ ...
လူတိုင်း ကြုံရနိုင်တဲ့ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်
Written by : ဒေါက်တာသီဟသစ်
(၁) အသက် ၄၀ နားနီးကနေ ၆၀ နှစ်ကြားထဲက လူတိုင်း ဖြစ်နိုင်သလို အဲဒီအသက် မရောက်သေးသူ လူငယ်များလည်း မဖြစ်မနေ သိရှိ မှတ်သားထားသင့်တဲ့ရောဂါတစ်ခုအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၂) ငါ့ရဲ့ အသက်ရှင် ဖြစ်တည်နေမှုရဲ့ အနှစ်သာရက ဘာလဲ။ ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာ ဘာများလဲကွယ်။ မှန်ကြည့်တိုင်း ငါ့ကို ပြန်ငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူဟာ ဘယ်သူလဲ။ ဟူး…………. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မမှတ်မိချင်တော့ဘူး။ ငါရူးများ ရူးသွားပြီလား။
လောကကြီးကိုက နားလည်မှု၊ စောင့်စည်းမှုတွေ မရှိတော့တာ အရမ်းစိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်။ ငါ့ဟာငါ ဘာလိုချင် ဘာဆက်ဖြစ်ချင်မှန်းတော့ မသိတော့ဘူး။ အရာအားလုံးဟာ စိတ်ကုန်စရာလို့ပဲ ခံစားနေရတယ်။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ငါ့ဘ၀က အကုန်လုံး အလိုမကျစရာ၊ နောင်တရစရာတွေချည်းပဲ။
တစ်ချိန်က အရူးအမူး ငါကြိုးစားခဲ့တာတွေ အခုတော့လည်း ဘာမှ မဟုတ်သလိုပဲ။ ငါ့မိသားစုအတွက် ငါ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ငါအနစ်နာခံ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေ တကယ်တမ်းကျ မတန်ဘူး။
အခုကျတော့ အရာအားလုံး ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပြီ။ ငါ့ဘ၀ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချိန်တွေ၊ ထက်မြက်နုပျိုတဲ့ အချိန်တွေ ကျန်ခဲ့ပြီ။ ပြန်မရနိုင်တော့တာ အသေအချာပဲ။
ရှေ့လျှောက် ကောင်းဖို့လည်း မမြင်တော့ဘူး။ ငါအသက်ကြီးလာပြီလေ။ အိုလာပြီ။ ရုပ်ကျသွားတာ အရမ်းသိသာတာပဲ။
သက်လတ်ပိုင်းဆိုတာ လူငယ်ဘ၀ရဲ့ ရင်ခုန်စွဲမက်စရာ ပိုင်ဆိုင်မှုအတော်များများကို မြေမြှုပ်သဂြိုင်္လ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ထင်
တယ်။ နောက်ထပ် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဘ၀ရဲ့ စာမျက်နှာ သစ်တွေ ဘယ်လောက်မှ ကျန်တော့မယ် မထင်ဘူး။
ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်တော့လည်း ……….
အို…..ဘ၀ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ထွေထွေထူးထူး နှစ်သက်စရာ မကောင်းလှပါဘူး။
အကုန်လုံးက မသေချာ မရေရာတာနဲ့ စမ်းတ၀ါးဝါးနိုင်လိုက်တာ။
ပြောလိုက်ကြတာများ ဘာတဲ့။ ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲဆိုလားပဲ။
တကယ်တမ်းသာ အဲလိုဆိုရင် ငါဟာနှစ်ရှည်လများ တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲပြီးသွားလို့ ဗုံးဆံတွေ ယမ်းငွေ့တွေကြား အားပြတ်လဲကျနေလို့ အိမ်မပြန်ရသေးတဲ့ စစ်သားအိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်မှာပဲ။
ငါ့မှာ အဖော်ကောင်းရယ်လို့မှ မရှိတော့တာ။
ငါလိုလားတောင့်တခဲ့တဲ့ အရာတွေကရော…….. ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင်တွေကရော……. အကုန်လေးလံ နှေးကွေးနေတာပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲမှာ ငါပိတ်မိနေပြီ။ အရင်တုန်းက ဒီအနေအထားတွေနဲ့ ငါတင်းတိမ်ရောင့်ရဲခဲ့တာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ငါမပျော်တော့ဘူး။ မတင်းတိမ်မရောင့်ရဲ နိုင်တော့ဘူး။ လက်ရှိရှိနေတဲ့ မိသားစုဟာလည်း မွန်းကြပ်စရာပဲ။ ငါအကုန်လုံးကို မကျေနပ်တော့ဘူး။ အပြောင်းအလဲ ပျော်စရာတွေ ငါလုပ်နိုင်ပါဦးမလား။ ငါ့အသက်က ကြီးနေပြီလေ။ သေခြင်းတရားနဲ့ တွေ့ရဖို့ သိပ်အများကြီးမလိုတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်က ဘာတွေများ ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးနိုင်ဦးမှာလဲကွယ်………။
ငါနေ့တိုင်း လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တွေဟာ သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတာပဲ။ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
ထွက်ပြီး အလုပ်အသစ်ပြောင်းရင် ကောင်းမလား။ ဟုတ်တယ်။
ငါ့ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အသစ်အဆန်းတွေ၊ ရင်ခုန်ကြည်နူးရမှုတွေကို ငါ့ဟာငါ ဖန်တီးရှာဖွေမယ်။ ငွေနဲ့ ၀ယ်လို့ရသမျှ ၀ယ်မယ်။ ငါမအိုသေးဘူး ဆိုတာမျိုး ရအောင်နေပြမယ်။
ဟူး…….. ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်က စပြောင်းလဲရမှန်း မသိပါလားနော်။
(၃) စာပိုဒ် အမှတ် (၂) မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန် အတွေးတွေဟာ ၀တ္ထုဆန်အောင်၊ ရသမြောက်အဖွဲ့ဆန်အောင် အနုပညာဈာန်နဲ့ ဖန်တီးရေးသားထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် (Midlife Crisis) ရဲ့ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ လက္ခဏာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အသက် ၄၀ ပြည့်ပြီးသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အထက်ပါ အတွေးတွေအတိုင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် တွေးမိနေပါက သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဂယက် ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(၄) Mid-life Crisis ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အနောက်တိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်က အီးလီးယက် ဂျက်ခ် ဆိုသူက စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး အဆိုပါ စကားလုံးဟာ သက်လတ်ပိုင်း ရောက်နေတဲ့ လူအချို့ ငယ်ရွယ်နုမျစ်မှုရဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းလာကာ အိုမင်းလာမှုကို သတိထားမိစပြုလာတဲ့ အချိန်မှာ အလိုမကျခြင်း ပြင်းစွာ ဖြစ်ရတဲ့ ကာလတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားလုံးဟာ တဖြည်ဖြည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောမျိုး ဆောင်လာပါတယ်။
သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို ခံစားသက်ရောက်စေတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်က ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြန်မိ၍ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကဲ့ရဲ့မှုကို ခံရခြင်း၊ အမျိုးသားသဘာဝ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ကျဆင်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးခြင်း၊ ဘ၀လက်တွဲဖော် (သို့) ချစ်ခင်ရသူ အရင်းအချာ တစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်သွားခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားခြင်း၊ ရာထူးကျခြင်း၊ လက်ရှိ အလုပ်သည် မုန်းစရာကောင်းသည်ဟု ခံစားနေရသော်လည်း တူမျှသော ၀င်ငွေ ဆက်ရနေအောင် အလုပ်မပြောင်းနိုင်သေးသဖြင့် လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲ ဇွတ်ပေလုပ်နေရခြင်း၊ သားသမီးများ အရွယ်ရောက်ကာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခွဲခွာသွားခြင်း စသည့် ဘ၀နှင့်ချီ စိတ်ထိခိုက်ရသော ထိုးနှက်ချက်များ ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ စောစောက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂယောက်ဂယက် အတွေးပေါင်းစုံ ၀င်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရုပ်ရည်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စတဲ့ အချက်တွေအပေါ် အားမလိုအားမရ ခံစားလာရခြင်းကို သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဂယက်လို့ ခေါ်တာပါ။
အသက် ၄၀ နဲ့ ၆၀ ကြားမှာပဲ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ တွေ့ရှိထားပေမယ့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ကိုးကွယ်မှု အားကောင်းလာတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် ၃၅ နှစ်အထက် လူတွေလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ သင့်ပြီလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဆိုချင်ပါတယ်။
အဲဒီလို မကျေနပ်မှုတွေဟာ အရင်နဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ အမူအကျင့် နေပုံထိုင်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမိခြင်းဖြင့် ပွင့်ကန်ထွက်ကုန်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်မရှိသေးသူများ အဆင်ပြေသလို ပြုပစ်လိုက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အချစ်သစ် ရှာချင်လာခြင်း၊ ပြည့်စုံသူများက တကယ့်ဈေးကြီးပါပေ့ ဆိုသော လူတိုင်းငေးလောက်သည့် အသုံးအဆောင်များ (ဥပမာ ယာဉ်၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း) ၀ယ်ယူသုံးစွဲပစ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှပအောင် အသစ်တစ်ဖန် အလှဆင် မွမ်းမံခြင်း (အလှပြင်ဆိုင် မှန်မှန် သွားခြင်း၊ မူးယစ်သေစာ သောက်စားဖြစ်လာခြင်း စတာတွေ အရင်က မလုပ်ဖူးရင်တောင် လုပ်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကလေးယူတာ နောက်ကျလို့ အဲဒီအချိန်မှာ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ သားသမီးတွေ ရှိနေသေးရင် အဲဒီ ကလေးတွေကို ကျောင်းစာ၊ အားကစား၊ ဘာသာစကား စတဲ့ ဘက်စုံမှာ အလွန်အမင်း တော်စေလွန်းလို့ အတင်းအကြပ်ဖိအားပေးရင်း မိဘနဲ့ သားသမီးကြား ပဋိပက္ခ ပိုဆိုးလာတာ တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ မိဘတွေ ဖက်ကတော့ စေတနာနဲ့ပါ ဆိုပေမယ့် သူ့ဟာသူ Mid-life Crisis ခံစားနေရတဲ့ ရောင်ပြန်ကို သားသမီးတွေ အပေါ် လာဟပ်တာတော့ အသိနဲ့ ထိန်းရမယ့် ကိစ္စပါပဲ။
လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် ဆိုတာ လူ ၁၀ ယောက်မှာ တစ်ယောက် ဘ၀မှာ မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပြီး အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကားအကောင်းစားတွေ (အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေ စီးတဲ့ ပြိုင်ကားတွေ) ၊ ပင်လယ်စီး စပိဘုတ်တွေ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ဇိမ်ခံအီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေဟာ အရမ်းရောင်းရပါသတဲ့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်း ပစ္စည်းဝယ်နိုင်စွမ်း (Purchasing Power) မြင့်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေ ၁၀% က ၀ိုင်းဝယ်တာ ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။
ဘာလို့ အဲဒီလို လုပ်ကြသလဲ ဆိုတော့ မသိစိတ်ထဲက ဘာမှန်းမသိတဲ့ စိတ်ကူးပန်းတိုင် အိပ်မက်ကို ဖွေရှာဖြည့်ဆည်းချင်ကြလို့ပါ။ ခက်တာက ပန်းတိုင်က ဘာမှန်းမသိလို့ စိတ်ရူးပေါက်ရာ လျှောက်လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒါ့အပြင် မပြီးပြတ်သေးတဲ့ (သို့) မလုပ်နိုင်လောက်တော့တဲ့ စိတ်ကူးတွေအတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိနေတာကိုး။ ရွယ်တူတန်းတူတွေ ကိုယ့်ထက်အောင်မြင်တာ တွေ့တိုင်းလည်း ရှက်ရွံ့အားငယ်စိတ်ကို ရင်ထဲကြိတ်ခံစားထားရတာလည်း ပါပါတယ်။ ဒီတော့ နုပျိုခြင်းကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ ထင်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ သုံးတယ်။ တချို့ဆို လူငယ်တွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းသစ်တွေနဲ့ ပြောင်းပြီး သွားပေါင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ သင်းကွဲတယ်ဆိုတာ အဲဒါပေါ့။
(၅) ဒီနေရာမှာ mmDailyNews ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များရဲ့ ရင်ထဲမှာ မတင်မကျ ဖြစ်နေတာ တစ်ခု ရှိနေမယ်လို့ ကျွန်တော်သိနေပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတွေးတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေ ဆိုတာ နေ့စဉ်ဘ၀ လူအတော်များများ စိတ်ထဲ ပေါ်နေကျ အရာတွေ ဖြစ်ပြီး ဒါတွေက ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလို့လဲ / ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က ဘာတွေ လာပြောနေသလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
Mid-Life Crisis ဟာ အမျိုးသားတွေကော အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးတွေကို မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ထိုးနှက်ဖျက်ဆီးပါတယ်။ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် ခံစားရသူ အမျိုးသား ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်ဟာ အရက်ရဲ့ ကျေးကျွန် ဖြစ်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ အရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် သောက်ဖြစ်သွားတဲ့ ၄င်းတို့ဟာ အသည်းအဆီဖုံး/ခြောက်၊ အသည်းကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေနဲ့ ဆေးရုံကုတင်ပေါ် ၅ နှစ်ကနေ ၇ နှစ်အတွင်း သေချာပေါက် ရောက်လာကြပါတယ်။ တခြားမူးယစ်ဆေးဝါး ဆိုရင်တော့ သေနိုင်စွမ်းက အရက်ထက် စောမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါက ပထမအချက်ပါ။
အဲလို အသက်အရွယ် အမျိုးသားတွေမှာ မူးယစ်သေစာကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တဲ့ နှုန်းတွေ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ဖြစ်တဲ့ နှုန်းတွေ မြင့်မားနေတဲ့ အချက်က အတော်လေး သိသာပါတယ်။ ဒါက ဒုတိယအချက်ပေါ့။
တတိယ အချက် ပြောရမယ် ဆိုရင် လိင်မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ အဆင်အခြင်မဲ့ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် HIV အပါအ၀င် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပေါင်းစုံ ကူးဖို့ အခွင့်အလမ်း မြင့်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးသုံးတယ်ဆိုပေမယ့် မူးယစ်ရီဝေနေချိန်မှာ၊ စိတ်လေနေချိန်မှာ သုံးပုံစနစ်မကျတာလေး တစ်ခါတည်းနဲ့ HIV POSITIVE ဖြစ်သွားသူတွေ ခဏခဏ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီသုံးချက်ဟာ အမျိုးသားတွေ အတွက် Mid-life Crisis ရဲ့ အထူးအန္တရာယ် များတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သုံးခုပါ။
အမျိုးသမီးတွေကျတော့ သွေးဆုံးခါနီးလာလို့ မ ဟော်မုန်း အားနည်းလာကာ တရှောင်ရှောင်တပိန်ပိန်နဲ့ ဝေဒနာလေးများ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ စားမ၀င်၊ အိပ်မပျော်တာ၊ အရိုးပါးစ ပြုလာလို့ တစ်ခုခုဆို ဟိုနေရာ ဒီနေရာက ကိုက်တာ၊ သွေးဆုံးခါနီး ရာသီလာရင် ပိုဝေဒနာ ဆိုးလာတာ၊ သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ပိုဆိုးလာတာ၊ ရုပ်ကျနှုန်း သိသာလာလို့ စိတ်ပါ လိုက်ကျတာ စသဖြင့် အီစထရိုဂျင်ခေါ် မဟော်မုန်း အားနည်းမှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါတွေ တန်းစီပြီး ခံစားရတတ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သားသမီးတွေ အတောင်အလက် စုံလို့ မိဘရင်ခွင်ကနေ ထွက်သွားတဲ့ ဒဏ်ကို အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အထီးကျန်သိုက်မြုံ ရောဂါစု (Empty Nest Syndrome) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေက အဆက်အသွယ်မလုပ်၊ ဂရုစိုက်မှု အားနည်းရင် အမျိုးသမီး အများစုက သွေးတိုးရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေ ပိုဆိုးလာတတ်ကြကြောင်း သုတေသနတွေ အခိုင်အမာ ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ပြောရရင် အမျိုးသမီးတိုင်းတော့ မဆိုလိုပေမယ့် အချို့က လိင်မှုကိစ္စ ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ရောဂါတွေ ကူးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်က အမျိုးသမီးက အမျိုးသားထက် နည်းနည်း ပိုများတာတွေ့ရသလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင်သေးရှုံ့ချမှုမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေက ပိုခံရ ပိုအရှက်ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လွတ်မလား လုပ်ကြည့်ပေမယ့် Mid-life Crisis ကနေ ရုန်းမထွက် နိုင်တော့ ပြန်ဘူးပေါ့။
သွေးဆုံးစောလို့ လိင်မှုကိစ္စကို မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ထင်ကာ လက်လျော့လိုက်သူ အမျိုးသမီး အများစုဟာ အိမ်ထောင်ဖက်က အချစ်သစ်ရှာသွားတာကြောင့်ရယ်၊ ကိုယ်ပိုင် ပျော်ရွှင်မှုတစ်ရပ် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာရယ် ပေါင်းပြီး အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားကြပါတယ်။ (တကယ်တမ်းကတော့ သွေးဆုံးသွားပေမယ့် ချောမွေ့စေတဲ့ အဆီတစ်မျိုးမျိုးကို သုံးကာ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါ သေးသိမ်သွားခြင်းကို တားဆီးနိုင်သလို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာရေးအပေါ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျိုးပြုကြောင်း သုတေသနများအရ သိရပါတယ်)
သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဂယက်ကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မတူကြသလို လူနေမှု အဆင့်အတန်းအရလည်း မတူကြပါဘူး။ အနီးကပ်ဆုံးသူ သေသွားလို့ ကိုယ့်လည်း သေမျိုးပါလားဆိုပြီး ကြောက်လန့်သွားတဲ့ အချိန် (သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရဲ့ တရားဓမ္မကို လိုက်စားသူတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းသွားကြပါတယ်) မျိုးမှာ၊ သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျော်ကာ အိုလာပြီလို့ ခံစားရချိန်မှာ၊ လိင်မှုစွမ်းရည်တွေ ကျဆင်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ၊ ကြိုးစားရုန်းကန် ပေးဆပ်ခဲ့ရသော်လည်း အရာမရောက်ပါလားဟု အတွေးဝင်လာချိန်မှာ စသဖြင့် အကြောင်းတရား အမျိုးမျိုး ရှိကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်စလုံးမှာ တူညီစွာ ခံရတဲ့ အချက်ကတော့ သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဂယက်ကြောင့် ခံစားရမှုဟာ စိတ်ကျရောဂါ (Depression) ဆီကို ဦးတည်သွားတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမှုရေးမှာ ပြုမူနေထိုင်ပြောဆိုပုံတွေ (အထူးသဖြင့် စကားလုံးတွေ) ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်မိလို့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ မရှိတော့ဘဲ အထီးကျန်ကာ စိတ်ကျရောဂါ ပိုဆိုးလာတာတွေ၊ အိမ်အပြင်တောင် မထွက်ချင်တော့တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အပေါင်းအဖော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ပရဟိတ အလုပ်တွေ တတ်စွမ်းသ၍ လုပ်ခြင်း၊ အနုပညာ အတတ်ပညာ ဘာသာရေး စသဖြင့် သန်ရာတစ်ခုခု လေ့လာခြင်းစတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးနိုင်ရင်တော့ ခံသာပါသေးတယ်။ နို့မို့ စိတ်ကျရောဂါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေစိတ်ကို ဖြစ်စေတာ ကြောက်စရာပါပဲ။
ဒါကြောင့် အကြံပြုလိုတာက စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးချတဲ့ အရာများကြောင့် မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး မထိခိုက်ရအောင် အသိဥာဏ်ရှိရှိ ကာကွယ်ပါ၊ ဖြစ်လာရင်လည်း ကုသမှု အမြန်ဆုံး ရယူဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။
(၆) သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ……..???
ကမ္ဘာကျော် စိတ်ပညာရှင် ဆစ်ဂမန်ဖရွိုက်ကတော့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ Mid-life Crisis ဆိုတာ သေဖို့နီးလာတာ ခံစားမိလို့ ကြောက်တဲ့ စိတ်က မောင်းနှင်တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့ အတွေးစုတွေ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီအတွေးစုတွေရဲ့ ကန်ထွက်မှုဟာ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုး၊ လူပုံစံ အမျိုးမျိုးကို လိုက်ပြီး အပျော်ရှာခြင်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အပျော်ရှောင်ခြင်း အဖြစ်လည်းကောင်း စိတ်ရူးပေါက်စွာ ကွဲပြားကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၁ ရာစုရဲ့ အပေါ်ယံ ရွှေမှုန်ကြဲ ပကာသနအခြေခံ လူနေမှုစနစ်မှာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို လူတွေဟာ ပိုပြီး သိချင်စိတ် များလာကြပါတယ်။ လေ့လာလာကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ စိတ်ပညာရှင်တွေ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေဟာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် မကြုံရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများကို ရှာတွေ့လာကြပါတယ်။
- အိမ်ထောင်ရေးကို နွေးထွေးပျော်စရာကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
အိမ်ထောင်သက် အတော်လေးရလာတဲ့ သက်လတ်ပိုင်း အချိန်မှာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ချစ်ခင် စိတ်ပါမှု အရင်လောက် မများကြတော့ပါဘူး။ အိမ်တွင်းရေး ပျော်ရွှင်မှုဟာ အရောင်မှိန်လာပြီး လျစ်လျူရှုထားခံရတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတတ်ရင် သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် ပိုမို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မှု အမြဲရနေအောင် ကြံဆောင်ဖန်တီးပြီး သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို ကာကွယ်ပါ။
- သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းများ ရှိပါစေ။
တကယ်စစ်မှန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မရှိသူဟာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် ခံစားရဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်ကို အခုကတည်းက ပြုပြင်ဖာထေးထားပါ။ အကယ်၍ သင့်မှာ အဲလို နှလုံးသားချင်းနီးပြီး ဂရုတစိုက် ရှိတဲ့၊ အရေးကြုံရင် အားကိုးရတဲ့ မိတ်ဆွေ မရှိဘူး ဆိုရင် လူတွေက စိတ်ထားမကောင်းလို့ ဆိုပြီး အကြောင်းပြချက် မပေးပါနဲ့။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရဖို့ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်က မိတ်ဆွေကောင်း အရင် ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။
- သင့်အလုပ်အကိုင်ရဲ့ အရေးပါမှုနဲ့ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကို ပုံဖော်တွေးပါ။
သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်ဟာ လူတွေကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ အကျိုးပြုနေသလဲ အကောင်းဖက်က တွေးပါ။ သင်ဟာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ရင် သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကြောင့် လူတွေ ဘယ်လို အကျိုးရှိ ပျော်ရွှင်သွားစေသလဲ ဆိုတာမျိုး၊ သာမန် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေရင်လည်း ငါဟာကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်နေရာတွေမှာတော့ အရေးပါတယ် ဆိုတာမျိုး၊ အောက်ခြေအလုပ်တစ်ခု လုပ်နေရရင်လည်း ဖြေသိမ့်စရာ ကြံဖန်တွေးပါ။ ဒီနေရာနဲ့ မကျေနပ်နိုင်ရင် ရှေ့ကို လှမ်းဖို့ အားတွေ ထုတ်ပါ။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်သန်နေသ၍ သင်ဟာ Mid-life Crisis ဖြစ်ဖို့ ဝေးနေသေးတယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ နောက်ပြီး အသက် ၄၀-၅၀ အထိ နိမ့်ကျတဲ့ ဘ၀မျိုးမှာ နေလာပြီး တစ်ကျော့ပြန် အားမာန်တွေနဲ့ ထိပ်ဆုံးတစ်နေရာ ရသွားတဲ့ သူဌေးတွေ၊
အနုပညာသမားတွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေ စသဖြင့်
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင့်အတွက် အားတက်စရာ တစ်ခုပါပဲ။
- ပုံမှန် အားကစားလိုက်စားပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို စနစ်တကျ လုပ်ပေးခြင်းဟာ ဘ၀ကို စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ခြင်း၊ ဘ၀ကို တရားလွန် တပ်မက်စွဲလန်းခြင်း ဆိုတဲ့ အစွန်းတရားတွေကို ထိုက်သင့်သလောက် တားဆီးနိုင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေများကို ပေါ်စေတဲ့ အာနိသင် ရှိကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒါဟာ အိုမင်း လေးလံ အားယုတ်မှုကိုပါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုမို့ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုပါပဲ။
- ဘာသာရေး လိုက်စားပါ။
ဘာသာရေး လိုက်စားသူတွေဟာ ဘ၀အပေါ် မျှတတဲ့ အမြင်နဲ့ ကြည့်တတ်ကြလို့ သာမန်လူတွေထက် စိတ်နှလုံး ပိုအေးချမ်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ တရားဘာဝနာ ပွားများခြင်း (Meditation) ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အလိုမကျမှုတွေကို ကုစားဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်သလို Mid-life Crisis ကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ သတိမေ့ ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်လက်ပါပဲ။
- အရမ်းရှုပ်ထွေးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ပုံစံထက် အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀ကို ရွေးချယ်ပါ။
အရမ်းလန်းတဲ့ကား၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း၊ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ၊ ပိုက်ဆံဖြုန်းတဲ့ အားလပ်ရက် ခရီးစဉ်တွေဟာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကို ပေးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဖက်နဲ့ အဆုံးသတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေထဲက အချို့တစ်ဝက် ရှိရင် အတော်လေးကောင်းတဲ့ ဘ၀ ဖြစ်ပေမယ့် အကုန်လုံး ရှိဖို့ အရေး ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးပမ်းနေခြင်းဟာ တစ်ချိန်မှာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် ကြုံကိုကြုံရမယ့် အနေအထားလို့ လူမှုစိတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။ သာမန်ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတွေကတော့ ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အဓိပ္ပာယ်ရှိမှုကို အစစအရာရာ ပြည့်စုံသူတွေထက် ၁.၅ ဆ ပိုခံစားရလေ့ ရှိပါသတဲ့။
အစွန်းရောက်လွန်းစွာဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းတွေကို ရှောင်နိုင်ရင် သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကိုလည်း ရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်လို့ ပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။
- ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး ခန္ဓာကိုယ် ပုံမပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာဆည်းပူး လိုက်နာထားပါ။ ဒါဆိုရင် သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် မကြုံဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဘ၀မှာ စိတ်မကျဉ်းကြပ်ဖို့ စားချင်တာ စားမယ်၊ နေချင်သလို နေမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဂယက်ကို ခံစားရဖို့ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး နီးစပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပြုံးစရာ အချက်တစ်ချက်က ခါးအဆမတန် တုတ်လာသူတွေဟာ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်တတ်ပါသတဲ့။ ဒါကြောင့် Mid-life Crisis ကို ကာကွယ်ဖို့ အလှူတွေချည်းပဲ လိုက်စားမနေပါနဲ့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘာသာရေးလဲ လိုက်စားပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
- အလွန်အမင်း နှလုံးသွင်း ခံစားတတ်သော အကျင့်ကို ပြင်ပါ။
ချစ်ခင်ရသူ တစ်ဦးဦးနဲ့ သေခွဲ ခွဲရတာမျိုး၊ အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်သွားတာမျိုး၊ သားသမီးတွေ စွန့်ခွာသွားတာမျိုး စတဲ့ ထိခိုက်နာကျင်ရမှုတွေကို မေ့ဖျောက်အေးချမ်းအောင် အထက်ပါ အချက် ၇-ချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံး ကာကွယ်ပါ။
တကယ်တမ်းကတော့ ဥရောပသားတွေ ပြောသလို အသက် ၄၀ မှ ဘ၀ စတယ်ဆိုတာဟာ အသက် ၄၀ ရောက်ရင် လူတစ်ယောက်အတွက် ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိသားစု စတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာကောင်းတွေ စုစည်းမိထားပြီး ဘ၀ရဲ့ အရသာကို အေးဆေး စခံစားရတော့မယ့် အရွယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် မိမိကိုယ် မိမိ အမှန်သိခြင်း (Self-actualization) နဲ့ မိမိရဲ့ ကောင်းမွန်မှုတွေကို သိရှိကျေနပ်ခြင်း (Self-awareness) ရအောင် ပြန်လည်ဝေဖန် သုံးသပ်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ရတော့မယ့် အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်မှာ Mid-life Crisis ခေါ် သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက်ကို မကြုံတွေ့ရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်နှလုံးသွင်းရင်း (အိုမင်းမှုဆိုတာ စာရေးသူလည်း ကိုယ်ချင်းစာ မခံစားပေးနိုင်သေးပေမယ့်) အိုမင်းမှုကိုလည်း ပုံမှန်စိတ်အနေအထားနဲ့ လက်ခံနှေးကွေးစေရင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ကြပါစေ။
ပုံလေးတွေဖြင့် ပူးတွဲမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
မူရင်းရေးသားသည့် စာရေးသူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Posted by Crystal at 3:33 PM0comments
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ .. မောင်ရယ်
ကြိုးကြာငှက်လေးတွေ တွေ့တော့ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ဂျပန်ပုံပြင်ထဲက မိုမိုတာရောနဲ့ ကြိုးကြာငှက်ပုံပြင်တွေ ပြန်သတိရမိတယ် သိလား ...။
ကြိုးကြာငှက်လေးနဲ့ ဂျပန်လယ်သမားလေးအကြောင်း ပုံပြင်ဖတ်ဖူးလား .. ဟင်
ပုံပြင်ကို မဖတ်ဖူးတဲ့အပြင် မကြားဖူးတဲ့ မောင်က နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျမပြောပြပါ့မယ်လေ ...
ရှေးရှေးတုန်းက ဂျပန်ပြည်မှာ လယ်သမားလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။
သူဟာ ခုလိုချမ်းအေးလှတဲ့ ရာသီမှာ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ကို ပြန်အလာ မြှားစိုက်နေတဲ့ ကြိုးကြာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကို တွေ့ပါလေရော။
ငှက်လေးက ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့် မပျံနိုင်ပဲ သွေးအိုင်ထဲ လဲနေတာပေါ့။ ငှက်လေးမှာ စိုက်နေတဲ့ မြှားကို ညင်သာစွာ ဖယ်ပြီး ဒဏ်ရာကို ဆေးထည့်ပေးဖို့ အိမ်ကို ခေါ်လာသတဲ့။
နွမ်းပါးလှတဲ့ လယ်သမားလေးက ငှက်လေးကို ဆေးထည့် ရေတိုက် အအေးဒဏ်ခံနိုင်အောင် နွေးထွေးဖို့ ဂရုစိုက်တာပေါ့။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ငှက်လေးရဲ့ ဒဏ်ရာမကောင်းသေးတော့ အစာကျွေး ဆေးကုပေးနေရသေးတယ်လေ။
ဒဏ်ရာကောင်းသွားတဲ့ တစ်နေ့တော့ ငှက်လေးက တောင်ပျံတွေ ပျံသန်းဖို့ စမ်းကြည့်သတဲ့။ လယ်သမားလေးက ငှက်လေးအပေါ် သံယောဇဉ်ဖြစ် ငှက်လေးကလည်း အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကို မခွဲနိုင်ရှာပါဘူး။ သဘာဝမတူလှတာမို့ တောင်ပံလေးတွေ ယှက်ခါယှက်ခါ ကျေးဇူးတင်သဖွယ်ပြုပြီး ကောင်းကင်ထဲ ပျံသန်းသွားပါသတဲ့။
မကြာခင် နှင်းတွေ သည်းတဲ့တစ်နေ့မှာ လယ်သမားလေးဟာ တစ်ယောက်တည်း မီးလှုံနေစဉ် တံခါးခေါက်သံကြားလို့ သွားဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ ...
အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးက ဆံပင်တစ်ပတ်လျိုထုံးဖွဲ့လို့ သခင် .. ဒီအိမ်မှာ အလုပ်အကျွေးပြုပါရစေလုို့ ခွင့်တောင်းသတဲ့။ လယ်သမားလေးက ဒီအိမ်မှာ ဘာမှ အလုပ်မယ်မယ်ရရမရှိပါဘူး ညီမရယ် .. တခြားမှာ သွားအလုပ်တောင်းလှည့်ပါကွယ်။ ညီမကို ပေးဖို့ အဖိုးအခငွေကြေးလည်း မရှိပါဘူးကွယ် အစ်ကိုက ဆင်းရဲသားလယ်သမားပါလို့ ကောင်းမွန်စွာ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးက အို.. ကျမကို အဖိုးအခငွေကြေး ပေးစရာမလိုပါဘူးရှင်။ အစ်ကို စားသောက်ဖို့ ထမင်းဟင်းချက်ပေးပါ့မယ်၊ ကျမကို ထမင်းလေး ကျွေးထားရင်ရပါပြီရှင်။
အဲဒီအခါ ရာသီဥတုပြင်းထန်ချိန် မိန်းကလေးငယ်ကို လယ်သမားလေးက သနားသက်ဝင်လို့ အိမ်ကလေးမှာ နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါသတဲ့ ။
ဒီလုိုနဲ့ မနက် မိုးလင်းရင် လယ်သမားလေးက အလုပ်ဆင်း၊ မိန်းကလေးက အိမ်မှုကိစ္စပြုလုပ်ကာဖြင့် နေကြသတဲ့။ တနေ့တော့ ဘုရင့်နန်းတော်က ကြေညာတစ်ခုကို လယ်သမားလေးက အိမ်ကို ယူလာသတဲ့။ ကြေညာထားတာက အလှပဆုံးသော ကီမိုနိုကို ယက်ကန်းယက်လုပ်နိုင်တဲ့သူကို ဆုငွေအများဆုံး ချီးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ လယ်သမားလေးက ဆုငွေတွေသာရရင် ငါတော့ ချမ်းသာပြီလုို့ ရေရွတ်လိုက်သတဲ့။ အဲဒါကို မိန်းကလေးက ကြားသွားပြီး ကျမက အလှဆုံးသော ကီမိုနိုကို ယက်လုပ်ပါမယ်၊ ယက်ကန်းခတ်ဖို့သာ ကျမကို ပြင်ဆင်ပေးပါလို့ပြောသတဲ့။ ယက်ကန်းရုံလေးကို အိမ်နားက တဲမှာ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ယက်ကန်းခတ်ချိန်မှာ လာမကြည့်ဖို့ ကတိတောင်းသတဲ့။ လယ်သမားလေးလည်း ကတိပေးလုိုက်ပြီး အလှဆုံးကီမိုနိုအတွက် ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်။
မိန်ကလေးငယ်ဟာ တစ်ပတ်လုံးလုံး ယက်ကန်းရုံထဲဝင်လို့ ယက်ကန်းခတ်နေသတဲ့။ လယ်သမားလေးဟာ အစတော့ အပြင်ကသာ စောင့်ကြည့်နေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သိချင်စိတ်တွေ များလာသတဲ့။ ချည်တွေ မလို ယက်ကန်းနဲ့သာ ယက်ကန်းခတ်နေတဲ့အသံကြားရတော့ သိချင်စိတ်တွေက ရက်ကြာလာလေ ပိုတိုးလေပေ့ါ။
တစ်နေ့တော့ မိန်းကလေး မသိလောက်ဘူးလေ ဆိုပြီး ယက်ကန်းရုံရဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုကနေ ချောင်းကြည့်ပါသတဲ့ ...။
လယ်သမားလေးဟာ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် အံ့သြမင်သက်သွားပါတော့တယ်။ သူမြင်လုိုက်ရတာကတော့ ကြိုးကြာငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာ သူရဲ့ လှပတဲ့ အမွှေးအတောင်တွေကို နှုတ်ယူပြီး ယက်ကန်းစဉ်မှာ ယက်ကန်းခတ်နေတာကြောင့်ပေ့ါ။ ငှက်လေးဟာ သွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ အလွန်ပင်ပန်းနေရှာပါပြီ။ ယက်ကန်းစဉ်ဘေးမှာတော့ အလွန်လှပတဲ့ ကီမိုနိုအထည်အလိပ်လေးကို တွေ့ရသတဲ့။
၇-ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ အလွန်အားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကီမိုနိုအထည်လိပ်ကလေးကို ကိုင်ပြီး ထွက်လာပါတယ်။ လယ်သမားလေးလည်း စိတ်မကောင်းလှတာမို့ မင်သက်နေစဲအချိန်မှာ အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တာပါ၊ ညီမဟာ အစ်ကို ကယ်တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကြိုးကြာငှက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကို့ကို ညီမ ကတိတောင်းထားတာ မတည်လို့ ညီမ ပြန်ရပါတော့မယ်။ ဒီကီမိုနိုလေးကို နန်းတော်မှာ သွားရောင်းပြီး ချမ်းသာစွာ နေရစ်ပါတော့လို့ ပြောကာ အတောင်ပံကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကြိုးကြာငှက်မလေးအသွင်ဖြင့် ဟိုးအဝေးကို ပျံသန်းသွားပါတော့တယ်။
လယ်သမားလေးလည်း ကီမိုနိုလေး ရင်ဝယ်ပိုက်ရင်း စောင့်စည်းအပ်တဲ့ ကတိသစ္စာကို မစောင့်စည်းမိတဲ့အတွက် နောင်တတွေနဲ့ မျက်ရည်ဝဲရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသတဲ့။
ပုံပြင်လေးက ဒါပါပဲ မောင် ...
တကယ်လို့သာ စောင့်ထိန်းသင့်တဲ့ ကတိကို စောင့်စည်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ကီမိုနိုလေး ရောင်းရငွေနဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြမယ်ထင်တယ်နော်...။
ဒီလိုပါပဲ လောကမှာလည်း စောင့်စည်းသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ
တန်ဖိုးထားသင့်တဲ့ အရာတွေ ရှိတာပေါ့ မောင်ရယ် ...။
ဟိုးငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးကို ပြန်မှတ်မိသလောက်
ကြိုးကြာငှက်လေးတွေ မြင်မိတော့ ပြောပြဖြစ်သွားတာပါ။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပုံပြင်လေးပါ ...
လွမ်းစရာ ကြေကွဲစရာလေးပေါ့ ...။
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ မောင်ရယ် ...
Posted by Crystal at 5:22 PM0comments